တီးတိန်မြို့ အ၀င်လမ်း……….နှင့် ဝေဘူလရူ့ခင်း ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » တီးတိန်မြို့ အ၀င်လမ်း……….နှင့် ဝေဘူလရူ့ခင်း ………..
တီးတိန်မြို့ အ၀င်လမ်း……….နှင့် ဝေဘူလရူ့ခင်း ………..
Posted by yaungchikha on Jan 11, 2012 in Local Guides, Photography | 21 comments
ကျနော့်ဆီမှာ သင်တန်းလာတက်တဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက် ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ၊ ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့အ၀င်လမ်းကနေ မနက်ခင်းအလှကို ရိုက်ထားတာပါ၊ ကျနော်မရောက်ဘူးသေးပါဘူး၊ ရူ့ခင်းလေးတွေလှလို့ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…………….
အမှောင်ခွင်းပြီး အလင်းစချိန် နံနက်ခင်း တိမ်အလှနဲ့ တီးတိန်မြို့ အ၀င်
ဒါကတော့ နံနက်ခင်းအလင်း၊ တိမ်တွေနဲ့ယှဉ်တွဲ တီတိန်မြို့အ၀င်လမ်းလေး………
တောင်တန်းနဲ့ လယ်ထွန်ပြီးခါစ စပါးစိုက်ခင်းအလှ…….
ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကို မရောက်ဖူးသေးဘူး ….
သွားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားအုန်းမယ် … ရှုခင်းတွေ အရမ်းလှတာပဲ …
ဟိုးတောင်တန်းကို ဖုံးနေတဲ့ တိမ်တွေက
အဲလို တိမ်တွေကြားမှာ နေရတယ်ဆိုတာ
အရမ်းကိုလှတည်း ရူခင်းလေးပါဗျာ ရောက်အောင်တော. သွားဦးမယ်ဗျို…
ကိုယဉ်မောင်ရေ…. ကျနော်တင်တဲ့ ပုံလေးတွေကို သဘောကျလို့ ကူးထားတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်….
မမဝေရေ….. ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကို လာလည်ဖြစ်အောင် လည်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ သဘာဝအလှတွေရှိတဲ့ နေရာပါ………….
ကို fatty ပြောသလိုပဲ အဲယားကွန်းမလိုတဲ့မြို့ပေါ့………….
ကိုရန်ရှင်းရေ…….. ကျနော်မရောက်ဘူးသေးလို့ မေးပြီးရင် ပြန်ပြောပေးမယ်နော်……..
မြို့လေးက တော်တော်လေးသာယာပြီး လှတယ်နော်
ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ အခုတော့ ဓာတ်ပုံတွေထဲကပဲ
နောက်ခါ ကိုယ်တိုင် သွားရိုက်နိုင်ပါစေဗျား
ချစ်သုဝေ ဆိုထားတဲ့ တိမ်တွေနေတဲ့အရပ် ဆိုတာဒီလိုနေရာတွေကို ပြောတာကိုး
ဒါနဲ့ ကလေးမြို့မှာလည်း တခါတလေ အဲလိုမျိုး တိမ်တွေရံထားတတ်တယ်ဆိုလားပဲ.
ချင်းပြည်နယ် ဘက် မရောက်ရောက် အောင် လာခဲ့ပါဦး မယ်။
ရောင်ခြည်ရေ ပုံလေးတွေ ကြိုက်လို့ ရှယ်သွားတယ်နော် ..
ဂျူး ရဲ့ တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ကြိုးမှာလည်း ဒီလို ရှုခင်းတွေကို မျက်စိထဲမှာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင် ရေးသွားတာ …..
ခုတော့ ယုံလိုက်ပြီ လှချက်ကတော့ ….
သဘာဝအလှတွေ ကဗျာဆန်နေတာလေးကတော့ ဘယ်ပန်းချီ ရေးလို့မမှီပါပဲ…
ဆိုရိုးသတင်းစကားလေးတွေ က လည်း
မွှေးမွှေးလေးတွေ မို့ လို့ 
အရမ်း လာလည်ချင်ပါတယ် ဗျို့ 
zaymdy၊ မနွယ်ပင်၊ ဦးပေါက်ဖော်၊ M-Lulin၊ ကိုတော်ကာ တို့ရောက်အောင်လာခဲ့ကြပါနော်၊ ချင်းပြည်နယ်က ကြိုဆိုနေပါတယ်……….
ကိုအမတ်မင်းရေ ကလေးမြို့မှာတော့ တစ်ခါတစ်လေ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တောင်ပေါ်နဲ့တော့ မတူပါဘူး၊ မြူပုံစံမျိုးပါ…………
ကိုရန်ရှင်းမေးတာလေးကို တီးတိန်သူလေးတစ်ယောက်ကိုမေးပြီး ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်….
တာင်ပေါ်မှာကျတော့ တိမ်တွေက အထပ်လိုက်အဆုတ်လိုက်နဲ့ တောင်တန်းတွေကြားမှာ နေမထွက်ခင်မှာရှိနေပြီး နေထွက်ပြီဆိုတဲ့အချိန် ကျတော့မှ ရွာထဲကို ခဏဖြတ်ပြီး အမြင့်ကိုတက်သွားတတ်ပါတယ်၊ လေတိုက်မြန်လေလေ တိမ်သွားတာ မြန်လေပါပဲ …………
အခုလို တိမ်တွေနဲ့ တောင်တွေတွဲမြင်ရတာက ဆောင်းရာသီမှပါ၊ အထူးသဖြင့် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းလောက်ပါပဲ၊ ဖော်ဖ၀ါရီလဆိုရင်တော့ တိမ်မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်၊ ရွာက သူငယ်ချင်းများလည်း လာလည်မယ်ဆိုရင် ဆောင်းရာသီက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်…….
မpooh ရေ တင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို သဘောကျလို့ share သွားတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……
ချင်းပြည်နယ်က ရောက်ဘူးချင်ပြီး စာတွေထဲမှာဘဲ ဖတ်ပြီးကျေနပ်နေခဲ့ရတဲ့နေရာ.
အဲ ဂျုးရဲ့ တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ ကြိုးကိုဖတ်တော့ ရောဂါသဲလာပြီး
ကျနော်ဆိုင်က ကလေးတွေက ကလေးမြို့ကပဲ…ဒီကပြန်ရင် သွားလည်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်…မဟာမြိုင်တောထဲကိုလည်းဝင်ချင်သေးတယ်….တီးတိန်မြို့ကလေးကသာယာတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့သဘာဝရူခင်းတွေက ပကာသနမပါပဲ သဘာဝနဲ့ လှပတင့်တည်နေပါတယ်လေ…
မြင်ကွင်းလေးတွေက လှလိုက်တာ ၊ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတော့ ပုံ (၃)ပုံ ပဲ တွေ့ရတယ် ၊ တွေ့ရတဲ့ ပုံလေးတွေကိုက လှနေတာ
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကလို့ ထင်တယ် ဆေးရောင်စုံနဲ့ ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ဘူးတယ် ညွှန့်ဝင်းတို့ရိုက်ထားတာ ၊ သူ့သားပါတယ် ချင်းပြည်နယ်မှာ ရိုက်တာ ရှုခင်းတွေ အရမ်းလှတာပဲ အခု ဇာတ်လမ်းကို သေချာ မမှတ်မိတော့ပေမဲ့ အရမ်းလှတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ဆိုတာတော့မှတ်မိနေတယ် ၊ အခုချိန် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ နေသေးပေမဲ့ တိုင်းပြည်တိုးတက်လာရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နဲ့ အမှန်တကယ် စည်ကားလာမဲ့ နေရာတွေပါ အခုကတဲက အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ ပြည့်စုံနေအောင်လုပ်ထားရမယ်
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ချင်း တွေရှိတယ် ၊
မိန်းကလေးတွေတော့ မသိပေမဲ့ ( သက်မွန်မြင့်လို ချောမှာတော့ သေချာတယ် )
ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ လည်လည်ဝယ်ဝယ် ရှိကြတယ် ၊ သူ့ကို ချယ်လူလင်း လို့ နောက်ကြတယ် ၊ မလေး မှာလဲ ယူအက်စ် ကို ဆက်ထွက်ဘို့ စောင့်နေတဲ့ ချင်းတွေလဲ တွေ့ဘူးတယ်
ချင်းတောင်တန်း ရဲ့ ရှုခင်းလှလှတွေ ၊ နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀တွေ ၊ နွားနောက်မွေးတာတွေ လဲ မျှော်နေပါမယ်
အတော့်ကို သာယာတယ်နော်.. ရှုခင်းတွေကော နယ်မြေအလိုက် မျက်စိပဿဒရှိလိုက်တာ။ ရောက်ဖူးချင်တယ်။ ဘယ်တော့များမှ အဲဘက်တွေ ရောက်မလဲဆိုတာတော့မသိဘူး။ တောတောင်ရေမြေသဘာဝကို ကြည့်ရတာ သာယာစိုပြေတယ်နော်။
အော် yaungchikha က ချင်းပြည်နယ်ကကိုး
နေရာဒေသတိုင်းဟာ သူ့အလှလေးနှင့် သူ ရှိကြပါတယ်ကွယ် ။
ချင်းပြည်နယ်က အစားအသောက်တော့ နဲနဲ ပါးရှားသလားလို့ ။
ဝိတိုရိယ တောင်ကတော့ တောင်တက် စစမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်
နေရာကောင်းတစ်ခုပဲ ။ ပြေပြေလေးနှင့် မြင့်တယ် ။
ပေ ၁၀၀၀၀ ကျော်တော့ အောက်ဆီဂျင်လည်း နဲနဲငတ်တယ် ။
အဲဒီတော့ မြန်မြန်လျှောက်လို့မရတော့ဘူး တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်ရတယ် ။
ကိုပေါက်တို့ ၊ M-Lulin တို့ သွားစမ်းသပ်သင့်တယ် ။
ဂျုးရဲ့ “တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ ကြိုး” ကတော့ ချင်းပြည် ကိုလဲ ချည်ထားပြီး ပြီလို့ တွေးမိနေတယ်။
နောက်ပြီး – ထူးအိမ်သင် ရဲ့ “စကားပြောရင် ကျွန်တော် ကျွန်တော် နဲ့ …. ဂျင်းဘောင်းဘီ အမြဲ ဝတ်တယ်၊ သိပ်လှတဲ့ ကောင်မလေး ……. ” ဆိုတဲ့ စာသားပါ သီချင်းနာမည် ကိုလဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ကဲ Good Night အိပ်ပြီ “ကျွန်တော်” ရေ။ :-)
သီချင်းနာမည်-ညီမလေး ဖြစ်ပါတယ် အရီးတော်ခင်ဗျား..